अमेरिकी सेनाले ऊहानमा कोरोनाभाइरस ल्याएको हुनुपर्छः चीन – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:४५ March 13, 2020
चीनले ऊहानमा कोरोनाभाइरस देखा पर्नुमा अमेरिकी सेना जिम्मेवार भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष डिसेम्बरमा चीनको ऊहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म १ सय २७ देशमा फैलिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महामारीको संज्ञा दिइसकेको छ ।
तर कोरोना भाइरस चीनको ऊहानमा नै उत्पत्ति भएको कुरामा त्यहाँका विशिष्ठ व्यक्तित्व विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । हालै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी सेनाका कारण कोरोना भाइरस ऊहानसम्म आइपुगेको बताएका छन् ।
प्रवक्ता जाओ लिजियानले अंग्रेजीमा ट्वीट गर्दै लेखे, ‘अमेरिकामा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित कहिले भेटियो ? कतिजना संक्रमित भए ? अस्पतालका नाम के हुन् ?’
झाओले उक्त महामारी ऊहानसम्म ल्याइपुर्‍याउन अमेरिकी सैनिकको भूमिका हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
‘पारदर्शी हुनुहोस् ! आफ्नो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुहोस् ! अमेरिका, हामीलाई विस्तृत विवरण चाहियो,’ उनले लेखे ।
संसारभरी कोरोनाका १ लाख ३४ हजार ७ सय ६८ व्यक्ति संक्रमित छन् भने ४ हजार ९ सय ८३ को मृत्यु भइसकेको छ ।
कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि चिनियाँ सरकारले के कस्तो नीति अवलम्बन गर्‍यो, कस्ता तौर तरिका अपनाए भनेर किताब समेत निकालिएको छ । ‘अ ब्याटल अगेन्स्ट एपिडेमिकः चाइना कम्ब्याटिङ कोभिड–१९ इन २०२०’ नामको उक्त किताब थुप्रै भाषामा प्रकाशित छ ।
श्राेत : राताेपाटी
चाैरजहारी साच्चिकै सुन्दर छ, नभए एक पटक हेर्ने हाे की ?
सर्वसाधारणलाई ग्यास मौज्दात नराख्न मन्त्रालयको अपिल